Ihowuliseyili PVC granules ngaphaya for Kiddy Abantwana Jelly Shoes Iimbadada yoMvelisi kunye noMthengisi | INPVC
Izinto: PVC nentlaka + Eco-friendly Izongezo
Umbala: Ukungafihli, ukuTshintshela
Isicelo: Inaliti yezihlangu zeKididi
I-INPVC inikezela uluhlu olubanzi lwe-100% yeVirgin PVC iikhompawundi ezisetyenziselwa ukuveliswa kweKiddy yaBantwana iJelly Shoes. Izihlangu zethu zinokuxhathisa okuphezulu koomatshini, ukusebenza ngokukuko ekusebenzeni, ukuvelisa izinto ezintsha kunye nembonakalo ephezulu. Sinikezela ulwakhiwo olwenziwe ngokwezifiso kunye neemfuno ezizodwa ngokuqinisekiswa komgangatho kunye neenkonzo.
Izicathulo zeJelly, ezaziwa njengejeli, zenziwe ngePV ngokupheleleyo kwaye zibonakala ngokungafihlisiyo zikhangeleka njengejeli. Zenziwe ngokupheleleyo kwi-PVC, ezi mbadada zejeli zinobumnandi bebhamu yegum.
Kumashumi eminyaka, sizinikele kuphando, kuphuhliso kunye
Ukwenza le mveliso kwiyunithi yethu exhotyiswe kakuhle, iingcali zethu ezinezakhono zisebenzisa ibakala eliphezulu le-polyvinyl chloride kunye neendlela ezintsha. Imveliso enikezelwayo ifunwa ngokubanzi ukuba isetyenziswe kwimizi-mveliso yezihlangu ukwenza kunye nokuyila isiliphu somntwana, izihlangu, iimbadada, iibhutsi kunye nezonka.
I-INPVC-ngoku yenye yezona Ntloko zaBenzi bezihlangu zePvc Abavelisi. Isiseko sePVC senziwe kumzi-mveliso wethu wendlu kwaye siyafumaneka sigqityiwe kakuhle, esiqinisekisa intuthuzelo yodwa.Izinto zethu zaBantwana izihlangu zePVC Compound ziyadlula ngokuchasene neendawo ezahlukeneyo zomgangatho ngaphambi kokuba zinikezelwe kuwe.
I-masterbatches zethu ezinemibala eqaqambileyo zenza izihlangu zabantwana, iisiliphu, izihlangu zejeli zibukeke zinomtsalane kwaye iikhompawundi zethu zinceda izihlangu zakho zibe khaphukhaphu kwaye zomelele. Iimveliso zethu zenziwe zaza zalungiswa ngokuhambisa ubuchwepheshe obuphambili kunye noomatshini ngokuhambelana nemigangatho yomgangatho wehlabathi.
Uluhlu olubanzi lweemveliso ukuhlangabezana neemfuno ngobuntununtunu kunye nokusingqongileyo kunye nempilo yabantu, senza umgangatho ophakamileyo we-Phthalates-free kunye ne-Lead-free yeplastikhi. ezinye iinkcukacha ezinokufunwa ngumthengi.
Ukuxinana 1.22-1.35 g / cm3
Ukusetyenziswa Ijezi zeJelly Shoes, Amakhwenkwe amaNwele aMantombazana, Izihlangu zaBantwana eziPholileyo
Iimbadada zasebhantshi zaBantwana, Ihlangu zaBantwana zeCrystal zeHlabathi, izihlangu eziqhelekileyo zeSandal
Izihlangu ze-PVC zezihlangu zisetyenziswa ngokubanzi kwi-Kiddly yaBantwana iJelly Shoes inaliti. Iigrafu ezithambileyo neziguqukayo zePVC ezinokuxhathisa okuphezulu koomatshini, ukungavumba, ukumelana nokusonga okuhle kusetyenziswa izihlangu zabantwana.
Ukukhanya okuphezulu kunye nekristale ye-PVC yeepellets zinokwenziwa zibe mhlophe, zimdaka, tyheli njalo njalo.
Ngamava apheleleyo emveliso ye-PVC, sinikezela ngokweziqulatho ezizenzekelayo kunye neemfuno ezizodwa ngokwemfuneko yokuqinisekisa umgangatho kunye neenkonzo.
Egqithileyo Izinto eziguquguqukayo zePvc zeekhompiyutha zeenja zezilwanyana
Okulandelayo: Flexible Polyvinyl chloride Izinto For PVC iibhutsi Inaliti